Paramore's Hayley Williams, Mutsva Akawana Kubwinya kwaChad Gilbert akapatsanuka - Nhau
Paramore's Hayley Williams uye New Found Glory's Chad Gilbert kutsemuka mushure memwedzi gumi nematanhatu yekuroora, makore mapfumbamwe vari vaviri
Zvinoita kunge yakanyanya-ipfupi roorano pakati peParamore kumberi-mukadzi Hayley Williams uye New Found Glory gitare Chad Gilbert anga ari mumwe we 'Bhizinesi Rekutambudzika.'
Ivo vaviri vakaenda ku Instagram musi waChikunguru 1 kuti vazivise vavariro yavo yekuidaidza kuti yarega mushure memwedzi gumi nematanhatu yekuroora uye vangangoita makore gumi vari vaviri.
`` Zvizhinji zvinowedzera mukuisa chirevo pamwechete kupfuura chero munhu angamboona, '' vekare vaviri vakataura muchibvumirano chavo. 'Kune hupenyu chaihwo kuseri kwemashoko matema nemachena. Kurara husiku uye kuverengera uye kusuruvara uye kutya… Nehurombo, zvese zvinopedzisira zvave zvakafanana. Kunge kumwe kushambadzira. '
'Isu vaviri tanga tiri tese chikamu chakanaka chemakore gumi,' vakaenderera mberi. 'Takakura pamwe chete uye tanga tiri padivi peumwe kuburikidza nekuwanda kwekunaka uye nematambudziko mazhinji. Pane dambudziko rekuedza kunzwisisa moyo wako pachinhu chehukama… uye pane zvakanaka mukufunga mumwe moyo, kunyangwe uine wako. Kuroora hakusi kwekushaya moyo. Rudo ingozi chaiyo. Uye zviri kune mumwe nemumwe wedu kuramba tiine tariro kunyangwe mhedzisiro isiri iyo yataitarisira pakutanga. '
'Tinoda kutaura pachena - pachena, uye chete panguva ino - kuti tiri kupatsanuka,' vakaenderera mberi. 'Isu tinonzwa zvakare kuti zvakakosha kutaura kuti tichava vakanaka uyezve, tinoramba tiri shamwari dzepedyo dzakanaka mumaziso emumwe nemumwe. Ndicho chinhu chatinotenda zvikuru nacho. Kunyangwe mamiriro ezvinhu seaya anogona kunzwa achikunda. Ticharamba tichikurudzirana nekutsigirana pachedu uye nehunyanzvi. '
Wakawedzera avo vaimbove vaviri vaviri, 'Tine tariro, iwe uchanzwisisa kuti izvo zvemukati zvatiri kutarisana nazvo hazvisi zveumwe munhu kutakura. Isu chete. Kubvumira vanhu chero kupinda mune ino nguva muhupenyu hwedu kungave kusaremekedza nhoroondo yedu pamwe uye kugona kwedu kufambira mberi nekuvimbika. '
'Ndinokutendai kuvatsigiri vezvikwata zvedu zvese nerunako rwenyu rwamakaratidza kwatiri kwemakore mazhinji,' vakapedzisa. 'Kutenda kumhuri uye shamwari nekutida mumwaka yedu yese.'
Hapana Hayley kana Chad vakanyora zvinyorwa zvavo zve Instagram.
Ivo vakapfimbana muna Zvita 2014 uye vakasunga banga muFranklin, Tennessee, muna Kukadzi 20, 2016.
Vakanga vasati vaonekwa pamwe chete mumakore achangopfuura, zvakadaro, parutivi rwechitarisiko chakabatana pane kapeti tsvuku paA Alternative Press Music Awards muna Chikunguru 2014.
Muna Kubvumbi, gitare akaenda ku Instagram kunorumbidza bhendi remukadzi wake nekuda kwe 'Hard Times' yavo vasina uye vhidhiyo yemumhanzi inoenderana nayo.
'Pakupedzisira rwiyo @paramore nyowani & vhidhiyo yabuda uye inotyisa,' akaisa chinyorwa chekutora kwaHayley kubva muParamore mimhanzi vhidhiyo. 'Makorokoto varume! Anodada ne @yelyahwilliams nekuda kwekushanda nesimba uye nehunyanzvi zvaakaisa mune izvi rekodhi. Haugone kumirira kuti iro dambarefu rese ribude. Tarisa Zvakaoma Nguva izvozvi paYouTube! '
Kana paine chero sirivheri inonamira kupatsanurwa, vateveri veParamore neNew Vakawana Kubwinya vangangotarisira mbiri kumabhuruku ekuparadzanisa maalbum mumakore anouya…
Mwanasikana waRosie O'Donnell anopomera kushungurudzwa kuna amai
jeremy allen chena uye musikana
kim zolciak asina wigi yake
john cena uye nikki bella nyaya